भानुभक्तलाई सलाम - Vishwa News
वि. सं. १८२६ देखि १९४० सम्मको समयावधि नेपाली कविताको प्राथमिक काल अन्तर्गत पर्दछ । पृष्ठभूमिकालको गीत, गाथा, लोकपद्य तथा नाट्यगाथाद्वारा प्रेरित यस समयलाई लेखोटकाल समेत भन्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालको एकीकरण अभियान, अङ्ग्रेजसँगको युद्ध, सुगौली सन्धि, कोतपर्व, राणाकालको उदय आदि विशेष घटनाक्रमहरूले प्राथमिक कालको कविताको विकासका लागि प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्यसो त धार्मिक, आध्यात्मिक र नैतिक धारणाले प्रभाव पार्नुका साथै शास्त्रीय छन्द तथा पद्य लेखनबाट पनि यो काल प्रभावित देखिन्छ । नेपाल एकीकरणका समयमा राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वातावरणले प्रभाव पारेको बेला कविताको मुख्य धेय वीरताको वर्णन गर्नु नै रहेको थियो । वीरवन्दना, राजभक्ति र देशप्रेम यस चरणका कविताको आधारभूत विशेषता हुन् । कवित्वको भन्दा पनि वर्णन र विवरणको प्राधान्य बढिरहेको थियो । हाँस्य र श्रृङ्गार भावका अतिरिक्त आध्यात्मिक र नैतिक विषयवस्तु पनि यस समयमा प्रयोग भएका छन् । सुगौली सन्धि पछि उत्पन्न नैराश्य, चिन्ता एवं दमित मानसिकतासँगै यो धाराको पनि विच्छेद भएको देखिन्छ । वि. सं. १८७३ देखि १९४० सम्मको नेपाली कविताको समयावधिलाई प्राथमिक कालको उत्तराद्र्ध अर्थात् भक्तिकाल भनेर चिनिन्छ । यस अवधिलाई अङ्ग्रेजसँगको पराजयपछि विकसित आन्तरिक कलह, पदलोलुपता, हिंस्रक राजनीतिक घटनाक्रम तथा सत्तामोहले वितृष्णा पैदा गरी पृष्ठभूमिकालको धार्मिक र आध्यात्मिक प्रवृत्तिलाई उकास्न सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । भक्तिधारालाई प्रवृत्तिगत दृष्टिकोणले सगुण र निर्गुण गरी दुई भागमा बाँड्ने गरिन्छ । सगुण भक्तिधाराअन्तर्गत कृष्णभक्तिधारा र रामभक्तिधारा गरी दुई उपभेद रहेका छन् । कृष्णभक्तिधाराका आस्थाका केन्द्र भगवान् श्रीकृष्ण हुन् । रामभक्तिधाराको प्रवृत्ति रामकै चरित्रका वर्णन र गुणगान गर्नु हो । यसरी प्राथमिक कालीन नेपाली कविता यात्रामा भक्तिधारामा मलजल गर्दै आदिकवि भानुभक्त आचार्य उदाएका हुन् ।
संस्कृतमा रचना गरिएको अध्यात्म रामायणलाई मौलिकताका साथ नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपाली कविताको विकासमा उनले महत्वपूर्ण योगदान दिए । वि.सं. १८८९—१० को अवधिमा रामायणका सातै काण्डको अनुवाद गरिसकेका आचार्यमा पूर्ववर्ती कविका तुलनामा भाषिक परिष्कार, अभिव्यक्तिगत सरलता तथा काव्यगत वैशिष्ट्य पाइन्छ । मूलतः अनुवाद भए पनि भानुभक्तको रामायणमा मौलिकताको विन्यास रहेको पाइन्छ । रामायणका अतिरिक्त भक्तमाला, बधूशिक्षा, प्रश्नोत्तरी, रामगीता आदि कृतिले गर्दा नेपाली कविता सशक्त भएको देखिन्छ ।
२९ असार १८७१ मा तनहँको चुँदी रम्घामा प्रथम पटक पाइला टेकेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यले संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान बाजे श्रीकृष्ण आचार्यको संसर्गमा काव्ययात्रा थालेका हुन् । परिवारभित्रको काव्यधारात्मक वातावरण र मौलिक कवित्व शक्तिका कारण भानुभक्त संस्कृत साहित्यका आदिकवि वाल्मीकिद्वारा रचित अध्यात्म रामायणको नेपालीमा अनुवाद गरी सबै नेपालीको झुपडीमा पुग्न सफल भए । भानुभक्तले वाल्मीकि रामायणको केवल अनुवादमात्र गरेनन् त्यसमा मौलिकताले सिंगार्दै सहज, सरल र मिठासयुक्त ढंगले नेपाली पाराको रंगरोगन पनि गरे । नेपाली रामायणमा कतिपय विषय थपघट गरी नेपाली परम्परा तथा संस्कृति अनुकूल थपघट पनि गरे । भानुभक्तले नेपाली रामायणमा संस्कृत छन्दको प्रयोग सहजताका साथ गरेका छन् । यस महाकाव्यमा शार्दूलविक्रीडित छन्दको अधिक प्रयोग गरिएको छ । नेपाली रामायणको ठाउँठाउँमा प्राकृतिक सौन्दर्यताको मनोरम वर्णन, उपमा तथा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारको दिव्य संयोजन गरिएको छ । त्यसैगरी महाकाव्यमा शृंगार, वीर, हास्य, कणजस्ता रसको कुशलताका साथ प्रयोग गरिएको छ ।
अध्यात्म चेतनाले समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भानुभक्तको जताततै छचल्किएका छन् ।
रामायणमा मात्र होइन उनका अन्य रचनामा पनि नैतिक पक्ष र दार्शनिक चिन्तन व्यक्त भएको छ भने आध्यात्मिक नजरले भौतिक संसारलाई अवलोकन गरेको पाइन्छ । कवितामा हुनुपर्ने कल्पना, विचार र तादात्मकताजस्ता सारभूत तत्वको उपस्थितिले भानुभक्तका रचना ओजश्वी छन् ।
भानुभक्त अकस्मात देखिएका विषयवस्तुमा आकर्षक शैलीमा कविता रचना गर्न सक्षम थिए । उनले गर्मीको समयमा मूला, साग, केरा मोहीविना नै थालमा ल्याएको भुटेको मकै खानुपरेकोमा दुखेसो पोख्दै लेखेका छन् ।
कि ता सेता मूला कि त बरु हवस् साग उसको,
कि ता मुंग्रे केरा कि त बरु हवस् मोई अमिलो ।
असल हुन्थ्यो धुप्मा नतर कसरी खानु यसरी,
भुटी ल्यायौ थाल्मा मकइ तिमीले क्यान यसरी ।।
यस्ता कविताले एकातिर कविको चातुर्यता झल्किएको भेटिन्छ भने अर्कोतिर व्यवहारमा देखिने घटनाक्रमलाई पनि सहजताका साथ कविताको स्वरुपमा उतार्न सफल भएका देखिन्छन् । तत्काल देखिने विषयवस्तुलाई धाराप्रवाह कविता रचना गर्ने क्षमताले उनलाई आँशुकविको उपाधि पनि समालोचकहरुले दिएका छन् ।
मुद्दा खेप्दा काठमाडौंको जेलमा बस्नु परेपछि त्यहाँको परिवेशलाई व्यांगात्मक शैलीमा उनी लेख्छन्
लामखुट्टे उपियाँ उडुस् इ सँगी छन् इनकै लहड्मा बसी,
लामखुट्टेहरु गाउँछन् यी उपियाँ नाच्छन् म हेर्छु बसी ।।
यसैगरी भानुभक्तले भक्तमाला र बधुशिक्षाजस्ता कृतिमा पनि समाजको वास्तविक चित्रण उतारेका छन् ।
विश्वमा नेपाली जताजता पुगे पनि मुटुभरि भानुभक्त लिएर हिंड्छन् । भानुभक्तको नेपाल भौगोलिक रेखाभन्दा धेरै फराकिलो छ । नेपालसँग अरु कुनै साइनो नभएकाहरुलाई पनि जोड्ने काम आदिकवि भानुभक्तले गरेका छन् । भानुभक्तको रामायण झुपडी झुपडी पुगेको, मेलापात जाँदा, गोठालो जाँदा गाइएको, विवाह तथा ब्रतवन्ध हुँदै सप्ताह मन्डपमा घन्किएको प्रथम महाकाव्य हो र भानुभक्त नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
भानुजयन्तीको सन्दर्भमा अब केही हप्ता औपचारिक समारोहहरु हुनेछन् । सालिकमा माल्यार्पण, कविगोष्ठी, प्रभातफेरि आदि आदि तर भोलि भोलि भन्दैमा सबघर बितिगो बक्सियोस् आज झोली, भन्ने भानुभक्तलाई भोलिवादी संस्कार नै बोकेर एक डोको फूल चढाए पनि उनलाई सच्चा सम्मान गरेको मान्न सकिंदैन । हाम्रो संस्कारमा आजवाद ल्याउन सकेमात्र भानुको सच्चा सम्मान हुनेछ ।